နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ပထမဆုံးကြိုက်မိသော Blog များ
ဟုတ် ကျေနပ်ပါတယ် ရှင့် ဟိဟိ
နံမည်လဲ မှန်အောင် ပေါင်းထားပါတယ်နော် နောက်တခါ မမှားစေရဘူး စိတ်ချ ခိခိ
မမရေ ဗိုင်းရပ်စ် လို ဇာတ်လမ်းမျိုး လုပ်ဦးလေ ဖတ်ကောင်းတယ်လို့ သိလား
ကျွန်မလည်း မရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ကြိုက်တယ်။ အားပေးနေပါတယ်နော်။ လင့်ခလည်း လင့်ခထားပါမယ် =)
စာရေးကောင်းတဲ့ အစ်မရဲ့ ပထမဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့တွေထဲမှာ ပါခွင့်ရတာ အရမ်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ် အစ်မ။ တခုတ်တရ ထည့်ရေးထားတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်း)
Ich denke, dass Sie nicht recht sind. Ich kann die Position verteidigen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden. levitra 20mg forum viagra generika [url=http//t7-isis.org]viagra generika 100 mg[/url]